English नेपाली हिन्दी
लोकतन्त्रकै लोकतन्त्रीकरण अपरिहार्य
गोरखापत्र - खिमलाल देवकोटा
विश्व राजनीति र नेपाल अमेरिकी सेना फर्केपछिको अफगानिस्तान सङ्कट, अमेरिका र चीनका बीचमा केही व्यापार केन्द्रित कूटनीतिक पहलका कारण सी–वाइडेन वार्ताका माध्यमबाट साउथ चाइना सीको विवाद थोरै मत्थर भएको छ।
११ हजार पूर्वराष्ट्रसेवकले लिए कानुनविपरीत दोहोरो सुविधा, वर्षमै सरकारी ढुकुटीको ४० करोड दोहन
नयाँ पत्रिका दैनिक - नवराज मैनाली
कानुनविपरीत दोहोरो सुविधा लिने ११ हजारलाई लाभग्राहीबाट हटाउँदा महिनामै राज्यको तीन करोड ३० लाख रुपैयाँ बचत हुन्छ, जुन वर्षमा झन्डै ४० करोड हुन आउँछ । दोहोरो सुविधा लिइरहेको रकम उनीहरूले फिर्ता नगरे कानुनी कारबाहीको बाटोमा जाने विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले बताए ।
हेटौँडामा छैन रंगशाला, चौर सम्याउन र झार फँडानीमै बर्सेनि लाखौँ खर्च
थाहा खबर - काठमाडाै‌
शुक्रबार मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघले स्थानीय तह शहीद स्मृति गोल्डकपमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्‍यो।
...त्यसैले म सहरिया हुनै सक्दिनँ!
सेतोपाटी - काठमाडाै‌
उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि २०५३ सालदेखि गोरखाको एउटा गाउँबाट काठमाडौं छिरे। २०६० सालमा एक वर्ष फेरि गाउँमै फर्कें र त्यसपछि पुनः यो राजधानी सहरमा निरन्तर बस्दै आएको छु।
नीनाले साँचो बोल्दा...
हिमाल खबर - काठमाडाै‌
एक थिए- रूपनारायण गुप्ता। यिनको जीवन सत्तरीको दशकको आम भारतीय मध्यम वर्गीय मानिसको जस्तै थियो। सरकारी जागीर थियो। परम्परागत परिवार थियो, जहाँ सबै हुकुम बाबुको चल्थ्यो। परिवारका केही सदस्य व्यापारमा पनि थिए।
सम्बन्धविच्छेदको नयाँ 'भेरियन्ट'– पतिको कमाइबाट विदेशमा पढाइ, पीआर पाएपछि लात !
लोकान्तर - गगन अर्याल
१० वर्षको प्रेम सम्बन्धलाई उनीहरूले विवाहमा परिणत गरेका थिए। गाउँमा जन्मिएका विक्रम र शहरमा जन्मिएकी रञ्जनाबीच गाउँमा भेट हुँदा प्रेम सम्बन्ध गाँसिएको थियो। पछि परिवारकै सहमतिमा भव्य तबरले विवाह भएको थियो। विवाह गर्दा ससुराली पक्षले तराईमा घर वा जग्गा हुनुपर्ने शर्त राखेका थिए। विक्रमले गाउँको ऋण धन गरेर बुटबलमा जग्गा जोडेपछि विवाह भएको थियो।
किन कहिल्यै उदाएन देश बनाउने नेतृत्व ?
अनलाइनखबर - डम्बर खतिवडा
धेरैको गुनासो छ यो नेपालमा- ‘देश त धर्तीमा स्वर्गको एक टुक्रा नै हो, तर के गर्ने एउटा राम्रो नेता कहिल्यै जन्मेन। प्राकृतिक रूपले स्वर्ग जस्तो देश राजनीतिक रूपले सधैं नर्क जस्तो भयो। स्रोतसाधनले सम्पन्न भए पनि सधैं विदेशिन, गरीब कहलिन बाध्य भयौं।’ सामान्य र आमझैं लाग्ने यस्ता टिप्पणीभित्रको पीडा भने निकै गहिरो छ। सर्वसाधारणको हृदयभित्रबाट अभिव्यक्ति हुने यस्ता भावना बारम्बार सुन्नु पर्दा सबैलाई नमीठो लाग्नु स्वाभाविक हुन्छ।
त्यसपछि लेखक बीएस राईले १५ वर्षदेखिको प्रहरी सेवा छाडे
नेपाल खबर - समर्पण श्री
‘मैले उनीहरूलाई हतकडी लगाउनुपर्याे भने हात काँप्नेछन्। म पनि त्यही सांस्कृतिक सम्प्रदायको मान्छे हुँ। म आफ्नै संस्कृतिको हत्यारा कहिलेसम्म बनिरहुँ। जबकि प्रहरीमा जस्तो आदेश आउँछ त्यो गर्नुपर्छ,’ बीएसले भने।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा थप किचलो, देउवा उपप्रधानमन्त्री राख्नै नचाहने, यादवको दाबी यथावत्
राजधानी दैनिक - काठमाडाै‌
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा किचलो बढेको छ। सरकार बनेको ८२ दिन बित्दासमेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन।
एमालेमा बहस : पार्टीको 'ब्रान्डिङ'मा लाग्ने कि ओलीलाई हिरो बनाउनतिर?
पहिलोपोष्ट - काठमाडाै‌
नेकपा (एमाले)को विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको देवत्वकरण गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। पार्टीको 'ब्राण्डिङ' गर्नुको सट्टा व्यक्तिलाई नायक बनाउन खोजिएको भन्दै प्रतिनिधिहरुले प्रश्न उठाएको हुन्
संसारभर आपूर्ति शृङ्खला धर्मरायो, गाडीदेखि खेलौनासम्म अभाव
मालसामान ढुवानी गर्ने अमेरिकी पानीजहाजहरू कयौँ दिनसम्म समुद्रमै रोकिइरहेका छन्। किनकि ढुवानी गर्ने पर्याप्त सामग्री नै तयार छैन । अत्यधिक माग भए पनि बन्दरगाहहरूले पानीजहाजमा लाद्ने सामान उत्पादकबाटै पाइरहेका छैनन्।
बिबिसी - काठमाडौँ
त्यस बेला नयाँ दिल्लीले नेपाललाई संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया रोक्न भनेको र हाल भारतको विदेशमन्त्री रहेका तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस जयशङ्कर 'निक्कै कडा रूपमा प्रस्तुत भएको' नेपाली नेताहरूले उल्लेख गर्ने गरेका छन्।
गान्धी बन्न कति गाह्रो
महात्मा गान्धीलाई एकातिर हिन्दू समाजको एक समूहले हमला गरिरह्यो भने अर्कोतर्फ प्रगतिशील समूहले। मुसलमानहरूको एक समूहले हिन्दूवादीको आरोप लगायो भने हिन्दूहरूको अर्को समूहले उनलाई इस्लाम धर्म समर्थकका रूपमा निन्दा मात्र गरेन, हत्या नै गरिदियो।
दार्जिलिङ : नेपाली मन, नेपाली पन
अनलाइनखबर - काठमाडौं
यतिबेला दार्जिलिङलाई दशैं-तिहारले छपक्क छोइसकेको छ। बजारमा किनमेल गर्नेको घुइँचो छ । बर्खाभर घरपरिपरि उमि्रएको झारपात उखेल्ने, लिपपोत गरेर चिटिक्क बनाउन सुरु भइसकेको छ।
'याे बाटाे हिँड्दा मेरा हातखुट्टा काँप्छन्'
शिलापत्र - सागर चन्द
ज्यानै लिने गरी हमला गर्नेलाई हिरासतमा पठाउन नसक्दा चलाउने अझै पनि असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । ‘उनीहरू जेल नपर्दा मलाई डर लाग्छ,’ चलाउने भन्छन्, ‘न्यायको गुहार माग्दै म कहाँ, कहाँ पुगिन होला ? कसको चोटामा डुलिन होला ?’
मेकअपविनाकी हिरोइन !
नयाँ पत्रिका दैनिक - मञ्जु टेलर
साउथ इन्डियन सिनेक्षेत्रकी अभिनेत्री साई पल्लवी ‘नेचुरल लुक्स’का कारण चर्चित छिन्। नेचुरल ब्युटीलाई प्रमोट गरिरहेकी पल्लवीले ग्ल्यामर क्षेत्रमा बजारले निर्धारण गरेको सौन्दर्यको मानकलाई नै चुनौती दिइरहेकी छिन्।
लिली : मेरी आमा
बाह्रखरी - राजेश्वरी घिमिरे
बाहिर एउटा अग्लो युवक उभिएको थियो। उसले ‘गुडमर्निङ म्याडम, इट्स फ्रम लिली’ भन्दै एउटा ठूलो बुके हातमा थमाइदियो। मैले जबर्जस्ती थ्याङ्क यु भन्ने कोसिस गरेँ, तर मेरा ओँठ चलेनन्। ‘ह्याभ अ नाइस डे म्याडम’ भन्दै ऊ गइसकेको थियो। मैले ढोका ढप्क्याइदिएँ र बुकेतिर हेरेँ।
‘बग बाउन्टी’ युवाको आकर्षण
गोरखापत्र - अजय शर्मा
ह्याकिङलाई अझै पनि गलत अर्थमा नेपाली समाजमा बुझ्ने गरिएको अनुभव लाम्गादेको छ। लाम्गादे भन्नुहुन्छ, “खासमा हामी ‘इथिकल ह्याकर’ले ‘पेन टेस्टिङ’ मार्फत साइट जाँच गरेर कमजोरीहरू फेला पार्छौं।
डियर फातिमा, बि ह्याप्पी !
अन्नपूर्ण पोष्ट - भेषराज बुढाथोकी
उनले पंखाको मूल्य पसलेसँग छुट त मागिन् तर उनले आफ्नो नाबालक छोरालाई मृत्युको मुखबाट छुटाउन सकिनन्। समयले उनको छोरालाई कहिल्यै नभेट्टिने गरी छुटाएर लग्यो। कोख रित्तो बनायो।
नेपाल खबर - विभु लुइटेल
स्त्रीद्वेषी समाजले गर्भनिरोधक क्रिया–विधि सधैं रोक्ने यत्न गरिरह्यो। अहिले पनि गरिरहेको छ। महिला सशक्तिकरणका लागि गर्भनिरोध कति आवश्यक छ भनी बुझाउन लागिपरेका पेरियारका कुरा त्यहाँका तत्कालीन मुख्यमन्त्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारीलाई मन परिरहेको थिएन।
अप्ठ्यारोमा मुख्यमन्त्री राउत
हिमाल खबर - वीरेन्द्र रमण
मुख्यमन्त्री कार्यालयले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम अन्तर्गत ल्यापटप वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो। तर, अर्थले त्यो योजना नै रोकेपछि दुवै जनाबीच विवाद शुरू भएको कर्मचारी बताउँछन्।
अमेरिका बस्ने अजीव नेपालीले लुकाउँदै आएका यी सत्यहरू
मस्ती र मदिराको नशामा फसेको शहर !
रुद्र खरेल - काठमाडौं
रामसिंह रावल, जसले जुम्ली स्याउकाे मुल्य फुजी स्याउ बराबर बनाए
सँगै बाच्ने सँगै मर्ने भनी कसम खाएकाे नाता जब टुट्छ अनि दिइन्छ ‘हत्या’ सुपारी
डिल्ली पाण्डे - काठमाडाैँ
राजादेखि मन्त्रीसम्म आशिर्वाद थाप्न पुग्ने डाेल्पाकाे त्रिपुरासुन्दरी अर्थात् मन्दिर जन्माउने मन्दिर [भिडियाेसहित]
रामचन्द्र न्यौपाने - त्रिपुराकोट(डोल्पा)
'प्रेमले संसार जोड्छ, सिद्धान्तले संसार फोड्छ'
विक्रमवीर थापा - शिलोङ
श्रीमान, मन्त्री मागेको आरोप लागिसकेपछि पनि न्यायाधीशको कुर्सीमा बसिरहन मिल्छ ?
थरिथरिका शिवलिङ्ग: दुई हजार वर्षभन्दा लामो भ्रम
भिक्षु कश्यप - लण्डन
पर्यावरणीय असरले बदलिंदो तराई
उमाशङ्कर द्विवेदी ‘दधीचि’ - बीरगञ्ज
नेपालमा घुम्नलायक केही तालहरू छुटाउनु भयो कि?
सुरेन्द्र राना 'घुमफिरे' - काठमाडौं
हेमन्त विवश - काठमाडौं
नेकपा (एकीकृत समाजवादी): ‘माथिल्लो कमिटीमा आफू, तल्लो कमिटीमा श्रीमती, साली, नातागोता’
मासु भागबण्डा गर्दा आफूलाई हड्डी-हड्डी मात्रै दिएको भन्दै बाबुले गरे छाेराकाे हत्या
बिएल संवाददाता - खलंगा
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय: भाेलि सार्वजनिक बिदा, फुटबल टीमका खेलाडीहरूले जनही ५ लाख पाउने
पहाडकी रानी 'दार्जीलिङ'मा ती मधुमय दिनहरू, कहिले फर्केलान्
विक्रमवीर थापा - शिलाेङ, भारत
ती छुटेका दिनहरू
सम्पादक : माधव ढुङ्गेल
Copyright © 2021 - BL Media. All rights reserved.